Rayman Classic iri kutengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Rayman Classic iri kutengeswa kwenguva shoma
Ubisoft yakaburitsa Rayman Classic yekupemberera makore makumi maviri echinyakare vhezheni yaRayman. Mumutambo uyu tichafanirwa kutanga zviitiko zvitsva nezvakanyanya, muchikamu chaRayman, mumwe weanonyanya kukurudzira mapuratifomu emitambo yenguva dzese. Chokwadi kune akanyanya muhondo, zvinokuita kuti urangarire iyo mitambo isingaperi kubvira payakatangwa pamusika muna 1995. Sezvazviri muchinyorwa chepakutanga, isu tichafanirwa kusangana neakaipa VaRima avo vaba Great Proton uye vatora iyo Electoons. Rayman achange achiona nezvekusunungura maElectoons uye kukunda VaRima nekudzosera nyika kurasa kuwirirana.
Rayman Classic ine mutengo wenguva dzose we4,99 euros asi kwenguva yakati wandei, isina kutaurwa nemusimudziri, tinogona kurodha ma0,99 euros. Kana iwe uri mudiwa weiyo yakasarudzika, usazeze kutora mukana weichi chipo.
1 Rayman Classic Zvimiro
2 Rayman Classic ruzivo
Rayman Classic Zvimiro
RAYI Rayman, gamba rako raunofarira akazvarwa muna 1995.
REDZESA hupenyu hwemafungidziro epasirese kubva kumutambo wekutanga: Iyo Enchanted Sango, Iyo Land yeMimhanzi Bhendi, Iyo Bhuruu Makomo, Iyo Candy Nhare ...
MHANYA, kunzvenga, kusvetuka, kubaya nzira yako kuburikidza nematanho akasiyana siyana mune ino yakasarudzika platformer.
UNLEASH Rayman masimba akasarudzika, kubva kune telescopic chibhakera kusvika kune pelicopter, uye kukunda zvisikwa zvine hukasha.
TSVAKA UYE KUSUNGA maElectoons kuti apedze ese matanho uye kudzoreredza cosmic muyero.
BATSIRA iwo anonakidza uye emifananidzo mavara kubva pasirese nyika seBetilla, Tarayzan kana Joe yekunze.
VANODA vese maboss (Moskito, Mr. Sax, Mr. Rima…) mune epic uye yekupedzisira kusangana kuti usunungure shamwari dzako.
BEAT Nhoroondo modhi ine hupenyu humwe, kana sarudza Dzimwe nguva modhi kuti uedze kakawanda sezvaunoda.
Rayman Classic ruzivo
Kugadziriswa kwekupedzisira: 18-2-2016
Mitauro: Spanish, German, Simplified Chinese, Chinese Chinese, Korean, French, English, Italian, Japanese, uye Russian.
Iri svondo yakagadzirirwa ma iPhone 4s zvichienda mberi, saka hazvikurudzirwe kuiisa pane iyo iPhone 4.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Rayman Classic iri kutengeswa kwenguva shoma
Akaputswa masikirini anogona kupedzisira ari pa iPhone 7 nekuda kweiyo nyowani Gorilla Girazi
Square Enix iri kushanda pane yakasarudzika RPG yeApple Watch